Kedụ ka ndị nkwado si eme ka ọrụ Instagram karịa ndị na - emetụta ya | Martech Zone
Ka ọ na-erule 2019, a na-atụ anya itinye ego na ndị na-eme ihe nkiri na Instagram iru $ 2.3 ijeri Nke ahụ bụ ego dị egwu, mana na-atụ aka na ike nke mmemme a na-ahụkarị nke na-emetụta mkpebi ịzụta. N'ezie, a whopping 72% nke Instagram ndị ọrụ na-akọ na ha na-eme mkpebi nzụta dabere na onyonyo ndị a kesara n'elu ikpo okwu
Ntuziaka akụkụ Instagram… ị nwere ike ịgbaso m @dknewmedia! Jikere ịhụ ọtụtụ foto nke nkịta m Gambino na mmasị m na-aga n'ihu Bourbon. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye nkwalite bourbon… M pụtara Martech ụlọ ọrụ, na-achọ influencer… nke ọma…
Chọrọ iji ohere nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na-eto ngwa ngwa nke afọ a? Not nọghị sọ gị, 71% nke ndị ahịa ahịa na-achọ imeziwanye ahịa ha na Instagram. Ha na emefu ego nzuzu na mgbasa ozi na ịre ahịa. Ksenia Emelyanova, onye njikwa ahia na X ‑ Cart
Ndi akwukwo na X-Cart, na - eduga ikpo okwu ecommerce na - emeghe, na - ejikọ ihe omuma a zuru oke etu Instagram si emetụta azụmahịa. Ikekwe akụkụ kachasị amasị m na nyocha a bụ na ha chọtara na-akwado O yikarịrị ka ọ ga-emetụta mkpebi ịzụta karịa ndị na-eme ihe ike - ihe m na-ekwusa kemgbe oge!
Akụkụ nke Instagram Na-eji Ahịa Influencer
91% nke elu okomoko ụdị jiri influencer ahia
84% nke elu ụdị ejiji dị iche iche jiri influencer ahia
83% nke elu ụdị ndị mara mma jiri influencer ahia
82% nke elu ile ọbịa jiri influencer ahia
82% nke elu ụlọ ahịa jiri influencer ahia
76% nke elu ụdị ụgbọ ala jiri influencer ahia
61% nke elu ụdị ndị ahịa electronic jiri influencer ahia
45% nke elu ụdị nri na onunu jiri influencer ahia
38% nke elu ụdị nlekọta onwe gị jiri influencer ahia
16% nke elu ụlọ na-elekọta ụdị jiri influencer ahia
Jide n'aka na inyocha akwụkwọ ozi ahụ niile, ọkachasị nke ọma ndụmọdụ gbasara ndị na-akwado ya na ndị na-eme ihe ike. Nyere nnukwu ego na-arụ ọrụ na ndị na-akwado ya yana eziokwu ahụ bụ na ha dị ezigbo mkpa na onyinye ahụ, ịlaghachi na itinye ego na ya nwere ike ịdị elu karịa!
Tags: eji arụ ọrụụdị ejiji dị iche icheụgbọ alaakpaaka ụdịakpakanamdeụdị ụgbọ alaịma mmaụdị ndị mara mmaihe ọṅụṅụigwe eletrikụdị ndị ahịa electronicnriụdị nri na onununlekọta ụlọụlọ na-elekọta ụdịọbịaile ọbịaoyiyiahịa ahịainstagramokomokookomoko ụdịnlekọta onwe onyeụdị nlekọta onwe gịretailụlọ ahịa